Labada weeraryahan ee midkood ay kooxda Barcelona bedel uga dhigayso Luis Suarez oo daaha laga rogay – Gool FM
(Barcelona) 22 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso in labo weeraryahan ay la soo wareegto oo ay ku darsatay liiskeeda si ay bedel ugu noqdaan weeraryahankeeda Luis Suarez.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Spain ayaa la fahamsan yahay inay isha ku heyso inay keensato bedelka xiddigeeda reer Uruguay xagaagan kaasoo ay rabto in uu tartan la galo, laakiin waxa uu sidoo kale bedelayaa Suarez markii 32-sano jirkaan uu mustaqbalkiisa kooxda soo dhammeeyo.
Jariiradda AS ayaa soo warinaysa in guddiga Barcelona aysan ku faraxsaneyn in uu dhaqaaqo Suarez, laakiin waxa ay bilaabeen inay tixgeliyaan ciyaartoy yar yar oo ay u baahan yihiin inay ku bedelaan Suarez kuwaasoo lagama maarmaan ah.
Weeraryahanka reer Serbia ee Luka Jovic oo haatan amaah ku jooga Eintracht Frankfurt, isla markaana ay milkiyaddiisa leedahay Benfica ayaa ah bartilmaameedkooda ugu sarreeya, iyadoo warar gooni ah ay sheegayaan inay Barcelona durbaba diyaarinayaan 50 milyan oo euro oo u dhiganta 43.3 milyan oo gini oo ay ku dalbanayso adeeggiisa.
21-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay intii uu ku sugnaa dalka Jarmalka illaa iyo haatan, isagoo dhaliyay 15 gool 24 kulan oo uu u saftay horyaalka Bundesliga.
Barca ayaa sidoo kale raadineysa gool-dhaliyaha kooxda Valencia ee Rodrigo, kaasoo loo maleynayo inuu yahay mid uu door-bidayo tababare Ernesto Valverde, inkastoo uu dhaliyay kaliya shan gool oo horyaalka La Liga ah xilli ciyaareedkan.
Suarez ayaa dhaliyey 173 gool, waxaana uu abuuray 94 gool oo kale 237 kulan oo uu u saftay kooxda Barcelona tan iyo markii uu kaga soo biiray Liverpool sanadkii 2014-kii.
Qiimaha lagu heli karo xiddiga bartilmaameedka u ah kooxda Manchester City ee Thomas Partey oo la shaaciyey